पहिरोले घर बगाउँदा एक दम्पतिसहित तीन जनाको मृत्यु – Classic Khabar
September 2, 2021 115
अविरल वर्षाका कारण पहिरामा परेर पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पोखराका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परेर ३ जनाको मृत्यु भएको हो । कास्की प्रहरीका अनुसार बुधबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षापछि गएका पहिरोमा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा घरधनी ४५ वर्षका कृष्ण श्रेष्ठ र उहाँकी श्रीमती ३५ वर्षीया सुनमाया तामाङ रहनुभएको छ । पहिरामा परी उहाँका तीन वर्षीय छोरा सन्तोष बेपत्ता छन् भने घाइते आठ वर्षीय राजकुमारको मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता सुभास हमालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै , पोखरा–११ भन्ज्याङ नमुनाटोलस्थित एक घर पहिरोमा पुरिदा ४२ वर्षीय लक्ष्य नेपालीको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा परेर घाइते भएका उनको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय मौसममा आएको खराबीका कारण देशभर खत्तरा कायम रहेको छ । गएका केहि दिनमा मौसम सफा भए पनि रातिको समयमा पानी पर्ने गरेको छ । आजको मौसमको कुरा गर्दा हाल देशभर सामान्य बदली रहि प्रदेश नं १ का धेरै र प्रदेश नं२, बागमती प्रदेशका केहि स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ ।
Prevयिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज काल बनेर आयो !
Nextअभिनेता रणवीरको अँगालोमा बेरिएकी यि सुन्दरी को हुन् ? किन पायो यो तस्बिरले चौतर्फि चर्चा ?
पूर्वराजालाई देउवाको चुनौती, ‘राजतन्त्र चाहिए राजनीति गरे भइहाल्यो नि’